နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေမှာ မြန်မာ မပါတော့ပါ
ဓာတ်ပုံ - Danish Siddiqui/Reuters
မိတ်ဆွေတစ်ဦးက လှမ်းမေးပါတယ်။ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလောက် ဆိုးရွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နေ့စဉ်ရှိနေတာကို နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနကြီးတွေက ဘာလို့ ‘အရေးတယူ’ မရေးကြတော့တာလဲ” တဲ့။ အဖြေ နှစ်ခု ရှိပါတယ်။
နံပတ် (၁) က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ မဟုတ်တဲ့အတွက်ပါ။ နံပတ် (၂) က မြန်မာအာဏာသိမ်း ဖြစ်စဉ်နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က လူသတ်နေတာဟာ သတင်းအနေနဲ့ ရိုးသွားလို့ပါပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာကိုပဲ သိတဲ့ နိုင်ငံတကာ စာဖတ်ပရိသတ်အဖို့ ဒီသတင်းတွေကိုပဲ စိတ်ဝင်စားကြတာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုံးချိန်းတို့၊ ရိုဟင်ဂျာတွေအကြောင်း Update သတင်းတို့ပဲ စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ရိုဟင်ဂျာသတင်းနဲ့အတူ ပူးတွဲပြီး နိုင်ငံတကာက စိတ်ဝင်စားကြတာက ရခိုင်တပ်မတော် (အေအေ) ပါပဲ။
ရိုဟင်ဂျာနဲ့ အေအေကို ပူးတွဲပြီး လေ့လာနေတဲ့ သုတေသနသမားတွေတောင် ရှိပါတယ်။ အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ် ကနဦးကာလ (ဖေဖော်ဝါရီ - မေ) ကတော့ မြန်မာအကြောင်း ဦးဦးဖျားဖျား စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟာ အပေါ်က ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာနှစ်ခုလောက် နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနတွေအတွက် အာရုံစိုက်စရာ မရှိတော့ပါ။ ဒါက ပထမ အကြောင်းရင်း။
ဒုတိယ အကြောင်းရင်း - သတင်းရဲ့ ထုံးစံအရ အဦးဆုံး အရင်ဆုံး ဖြစ်တဲ့သတင်းတွေကို ဦးစားပေးကြပါတယ်။ (ဥပမာ-က) ရွာတွေကို မီးရှို့တယ်ဆိုပါစို့။ ‘မြန်မာစစ်တပ်က တိုင်းရင်းသားကျေးရွာများကို မီးရှို့’ ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အကြိမ်ကြိမ် ရှို့ရင်ရော…? သတင်းအရ မထူးတော့ပါဘူး။ အများဆုံး လုပ်လို့ရတာက ‘၃ လအတွင်း မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်က ရွာပေါင်း ၂၀ ကျော် မီးရှို့ခဲ့’ ဆိုတာလောက်ပဲ ရမယ်။
(ဥပမာ-ခ) စစ်တပ်က လေယာဉ် (ရဟတ်ယာဉ်၊ ဂျက်) သုံးပြီး တိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ ပထမတစ်ကြိမ်တော့ ‘မြန်မာစစ်တပ်က လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်’ ဆိုတာမျိုးရေးကြမယ်။ လူ အများကြီး သေရင် ‘လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူပေါင်း ၂၀ ကျော်သေဆုံး’ ပေါ့။ ဒါပေမယ့် လေကြောင်းက အကြိမ်ကြိမ် တိုက်တယ်ဆိုပါစို့၊ ဒါက သတင်း မဟုတ်တော့ပြန်ပါဘူး။
ကားနဲ့တိုက်သတ်တာ၊ လူတွေကို မီးရှို့ပစ်တာ၊ ဖမ်းဆီးမိသူတွေဆီက ခြိမ်းခြောက် ငွေတောင်းတာ၊ ရှေ့တန်းမှာ လူသားဒိုင်းလုပ်တာ စတဲ့ကိစ္စတွေဟာလည်း ထိုနည်းပါပဲ။ ကြာလာရင် အကြိမ်ရေများလာရင် သတင်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။
တော်လှန်ရေး ကြာလာရင် စီးပွားရေး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ခုဆိုရင် အဖွဲ့ပေါင်းစုံ ပေါ်လာပြီ၊ PR Agency တွေဆိုလည်း NUG ကိုရော၊ တချို့ အဖွဲ့ပေါင်းစုံဆီရော ဝင်တိုးနေကြပြီ၊ အလုပ်လုပ်နေကြပြီ။ တစ်ဖက်မှာတော့ အာဏာသိမ်းတာကို အကြောင်းပြပြီး စုပေါင်းစပ်ပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားကြတဲ့ NGO တွေ အများကြီး ပေါ်လာနေပါပြီ။
#ကုလသမဂ္ဂ #ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် #မီဒီယာ #ရိုဟင်ဂျာ
You can treat meacup of coffee.
#NUG #ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် #မင်းအောင်လှိုင် #ကုလသမဂ္ဂ #အာဆီယံ #အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ #အစ္စလာမ် #စစ်ကြောရေး #ကရင်နီ (ကယား) #မီဒီယာ #စစ်ကောင်စီ #ပီဒီအက်ဖ် #ရိုဟင်ဂျာ #သရော်စာ
သတင်း၊ ဆောင်းပါးနဲ့ ဖန်တီးစာတွေ ရေးတယ်။ စာရေးခြင်းနဲ့ပဲ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုတယ်။ ကဗျာတွေကို ချစ်တယ်၊ ဂစ်တာ နည်းနည်း တီးတယ်။ Blues ကို သစ်ရွက်ခြောက်တွေကြား ခံစားတယ်။ ရံဖန်ရံခါ Heavy Metal တွေ နားထောင်တယ်။ Fixed Gear စက်ဘီး စီးတယ်။ ဘာသာတရားကိုးကွယ်မှုကို လေးစားပေမယ့် မယုံကြည်ဘူး။
© 2022 Mratt Kyaw Thu.